Ogaden News Agency (ONA) – Hanqadh oo lagu soo gabagabeeyay tababar iyo hawlgaladii Ramadaanka oo sii socda
Hanqadh oo lagu soo gabagabeeyay tababar iyo hawlgaladii Ramadaanka oo sii socda
Waxaa tababar loo xidhay ciidan ka tirsan qaybta Hanqadh ee CWXO 24/8/2011 kasoo lagu carbinayay qayba kala duwan oo ka mid ah naftood-hurayaasha CWXO halkaasoo ay ku qaateen tababaro gaar ah.
Ciidamadan oo mudo ku xaraysnaa saldhiga tababrka ee qaybta ayaa ugu danbayntii waxaa u soo xidhay tababrkooda sarkaal sare oo ka tirsan taliska Ciidan Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya.
Ciidanka loo xidhay tababrka ayaa la gudoonsiiyay abaalmarino kala duwan kuwaas oo muujinaya dadaalka ay sameeyeen ciidanka iyo macalimiintii hawshan gacanta ku haysay
Masuulkii u xidhay tababarka oo halkaas ka jeediyay hadal gaaban ayaa bogaadin ka dib u sheegay ciidanka waajibaadka laga sugayo iyo sida loogu baahan yahay inay uga soo baxaan tababarada ay halkaa ku qaateen. Xubna ka tirsan ciidankii tababarka qaatay oo halka ka hadlay ayaa balan ku qaadey inay xaqiijin doonaan waajibaadkooda, islamarkaana ay ku shaqayn doonaan aqoonta la siiyay waxayna hoosta ka xariiqeen inay aad ugu faraxsan yihiin xirfadaha kala duwan ee ay qaateen iyo sida ay wax u bareen macalimiintii gacanta ku haysay. Qaybta xilligan ka qalin jabisay tababarka ayaa loogu magacdar – mutafe goriile –
Dhanka kale wararka nagasoo gaadhaya xarunta dhexe ee jabhada ayaa sheegaya in dagaaladii bisha Ramaan ay wali u socdaan sidii loogu talagalay, dagaaladaas oo isugu jira weerar dhabagal ah iyo mira habeenimo ayaa loogu gaystay cadawga khasaarooyin kala duwan oo naf iyo hanta kaleba leh, iyadoo CWXO ay dagaaladaas kaga furteen hub iyo saanad kala duwan.
Dagaaladaas ayaa waxay u kala dhaceen sidan;
1/8/2001 dagaal ka dhacay faraqa miinada oo ka tirsan deegaanka Gunagado waxaa cadawga lagaga dilay 3 askari waxaana lagaga dhawaacay 3 kale
8/8/2011 dagaal ka dhacay meesha lagu magacaabo Gaalo kulan oo ka tirasna degmada Xamaro waxaa cadawga laga dilay 2 askari waxaana lagaga dhaawacay 3 kale
18/8/2011 waxaa ciidamada cadawga lagaga gubay meesha lagu magacaabo Dhiya oo ka tirsan degmada Dhagaxbuur hal baabuur oo nooca ciidamada ah waxaana kaga dhintay ciidanka cadawga in ka badan 30 askari
18/8/2011 dagaal ka dhacay meesha loo yaqaan Cawl oo ka tirsan deegaanka Xaraaray ee gobolka Nogbeed waxaa cadawga lagag dilay 2 askari waxaana lagag dhaawacay 3 askari.
20/8/2011 dagaal dhabagal ah oy sameeyeen CWXO deegaanka Boodhcaano oo ka tirsan degmada Goday waxaa lagaga gubay ciidamada cadawga hal baabuur iyo wixii saaraa.
Wararka aan ka helayno wariyan x/dhexe waxa ay intaa ku darayaan dagaalo isugu jira mir iyo dhabagal oo ay CWXO ku fulyeen ciidamada cadawga kuwaas oo ay wali dhiman tahay faahfaahinta laga helayaa waxaana ka mid ah goobahaas
Garbo garas, Guruma, Tukaalay, Balanbal, Malablay, Baarbaarta, iyo Baarbariis.
Sida caadada ciidamada cadawga ahayd marka ay dhibaatooyin ka soo gaadhaan goobaha dagaalada waxa uu dib ugu gadoodaa shacabka aan waxbagalabsan isaga oo u gaystay dil dhac iyo xabsi. Faafaahinta waxyeelooyinkaa ayaan gadaal ka soo qori doonaa.
aad baanu ugu diirsanhaynaa tallaabooyinka sii xoogaysanaya ee CWXO.
guusha iyaga ayaa leh insha allaah.